Meltwater Buzz Updates: Nchịkọta, Uru na ikike | Martech Zone
Ndị mmadụ na-ajụkarị m etu anyị siri nwee ike ịchọta ma dee banyere ọtụtụ teknụzụ azụmaahịa dị ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu na ndị ọkachamara na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe anyị na-ama anyị ụra, mana Martech Zone abụghị saịtị akụkọ - anyị bụ saịtị iji nyere ndị ahịa aka ịchọta teknụzụ ha nwere ike ịkwalite. Ọtụtụ n'ime ngwa ọrụ anyị kesara adịla nwa oge - mana ha na -ekekọrịta usoro ma ọ bụ atụmatụ anyị kwenyere na ndị bara uru bara uru.
Ihe anyị jiri Google Alerts mee n'eleghị anya, anyị na ndị mmekọ anyị na Meltwater na-eme ugbu a. Meltwater Buzz ozi-e juru na ịrịba ozi incredible mgbe ngwaọrụ na nyiwe na anyị na-akọrọ tupu. Anyị na-achọpụta banyere teknụzụ na ezigbo oge, ọ bụghị n'izu.
Nke a na-enyere anyị aka n'ọtụtụ ihu:
Ndị asọmpi - anyị n’enye ndi ahia anyi ozi banyere ndi asọmpi ohuru na ndi dị ugbu a, na enyere ha aka ịkwado ma dozie ngwaahịa nke aka ha.
Statistics - ọbụghị naanị na anyị na-amata karịa ka anyị na-agụ iji okwu, akụkọ ndị ahịa na akụkọ gbasara ahịa, anyị nwere ike ịfefe ndị ahịa anyị na ndị na-agụ akwụkwọ ahụ ozi ahụ.
Nchoputa - n'ezie, nke a bụ anụ nke Martech - anyị na-ekerịta posts na teknụzụ azụmaahịa nke na ọnweghị onye ọzọ nwere atụmatụ… ọ dịghị onye.
Na nke a post, Agaghị m ekerịta banyere Meltwater Buzz na web nyiwe… naanị alerts anyị na-enweta. Email ọ bụla na-amalite site na nkọwapụta nke ajụjụ okike ejiri na isi mmalite ndị nwere ozi. Aga m egosi gị nsụgharị ngwụsị izu ka ọ ghara ịdị arọ. Nke a bụ mkpọsa anyị nwere ntọala maka Mobile Marketing.
Anyị na-achọ ahịa efu na ngwakọta boolean nke ọ bụla n'elu ikpo okwu or technology. Anyị agbakwunyela ụfọdụ okwu ndị ọzọ iji kpochapụ nsonaazụ ahụ wee nweta ihe dị ka ọkwa ọrụ na nsonaazụ ahụ. Ozi email ahụ na-egosi anyị na e nwere ederede 2 blog, 2 kwuru na Twitter na 2 kwuru na Facebook. Ozugbo n'okpuru igwe ojii mkparịta ụka nke na-emetụta ụfọdụ nkebi ahịrịokwu ahụ.
Ngalaba na-esote na-enye nsonaazụ na ụfọdụ ịdị na-ewu ewu (na echiche) na ikike (ọkwa) nke nsonaazụ. Can pụrụ ịhụ a crappy banyere n'elu nwere 0 ewu ewu na 0 n'usoro - mfe ileghara anya. Mgbe ahụ, e nwere aha anyị Infographic Ahịa Ahịa - kedu ka oyi si dị? Ihe ederede site na ShopperTrak na-eme ka a mata banyere ụfọdụ omume na-adọrọ mmasị nke ndị na-eto eto na ahịa mkpanaka site na Pew Research.
Ihe ọlaedo; Otú ọ dị, ọ bụ mmelite Facebook Page banyere obere akwụkwọ free (Kindle Only) nke Uche Dijitalụ: Ihe 12 Ọ bụla Azụmaahịa Dị Mkpa Knowmara Banyere Digital Marketing si WSI. Enwere m ike ịnyefe ndị niile na-agụ akwụkwọ na ndị ahịa anyị.
Site na otu ozi email sitere na Meltwater Buzz, enwere m ike ịkụziri onwe m banyere omume ịzụ ahịa ụmụaka, na-ekele onye na-eso ụzọ maka ịkekọrịta ozi anyị, ma zigara ndị na-eso ụzọ anyị ezigbo ebook. Nke ahụ bụ otu email na ngwụcha izu! Cheedị ihe ị nwere ike iji ụlọ ọrụ a na ndị ahịa gị nwee ike!
Tags: nchịkọta ọdịnayanhaziemail mata